Soo dejisan ColorNote 3.10.6 – Vessoft
AndroidXafiiskaQoraalada iyo JadwalkaColorNote
Bogga rasmiga ah: ColorNote
ColorNote – codsi ku saabsan abuurka sahlan oo dhakhso ah qoraalada kala duwan. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay dejiyaan xusuusinta, badbaadin fariimaha, abaabulo loo qabto iyo liiska shopping. ColorNote u saamaxaaya in ay kala soocaan qoraalada by category oo u fiirsada midabyo kala duwan. Software falgala kalandarka kuu ogolaanaya inaad si ay ula qabsadaan jadwalka ama jadwal affaires ee bilaha soo socda. ColorNote taageertaa .Wadashaqayntaas ee qoraalada u dhexeeya qalabka Android oo macquul ah si loo joojiyo qoraalada by sir ah ama si ay u qabtaan gurmad ka ilaaliyo in SD-card. Sidoo kale software ka mid ah widget ka dhisay-in ay u ogolow in ay stickers dalwaddii shaashadda weyn ee qalabka.
Abuuridda Quick oo si sahlan qoraalada noocyada kala duwan
Bixinta qoraalada by midabka
Isku dhex leh kalandarka
Joojinta qoraalada la sirta ah
Nidaamka waano haboon
Soo dejisan ColorNote
Faallo ku saabsan ColorNote
ColorNote Xirfadaha la xiriira
Dhakhtarka Baytariga – waa barnaamij loogu tala galay in lagu carqaladeeyo lagana hortago isticmaalka tamar xad dhaafka ah ee awood u siinaya inuu batteriga aaladda ku hayo xaalad shaqo muddo dheer.
Easy Taksi – waa barnaamij loogu talo galay taksi u-dalbashada taksi ee dalal kala duwan oo dunida ah. Codsigu wuxuu si otomaatig ah u wacaa taksiga ugu dhow wuxuuna ku muujinayaa dhaqdhaqaaqiisa khariidada.